ကလိုစေးထူး: ကျော်ဝင်းနဲ့ နေဇာ...
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:58 PM
စံပြ စံပြ နဲ့ ကြောက်စရာကြီးပါလားး
ကျော်ဝင်း တော်တော် ငယ်သေးတဲ့အရွယ်လေးပဲ သနားစရာ။
Feb 6, 2009, 11:16:00 PM
အဲ့ ... ကွယ် .... ဒီလိုမျိုးရိုက်တာတော့ မကောင်းဘူး ....
တခြားအပြစ်ဒဏ်တခုခုလောက်ဆို တော်ပြီပေ့ါ ....
အဲ့ ... ကွယ် .... တခြားပြစ်ဒဏ်ဆိုလဲ ထောင်ချမှာဆိုတော့ ..... အဲ့ ... ကွယ်
ကလိုစေးထူးရေ လာလည်ပြီးဖတ်သွားပါကြောင်း ....
Feb 7, 2009, 1:09:00 AM
ငယ်ငယ်က အဘွားရဲ့ ကြိမ်လုံးတွေကို မောင်နှမတတွေ ချိုးပြီး လွှင့်ပစ်... အဘွားက ထပ်ဝယ်... ကြိမ်လုံး သံသရာ။ ရိုက်ခံထိရင် အရမ်းနာတယ် ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို တုတ်နဲ့ မရိုက်ဖို့ ရိုက်ဖို့လိုရင် ကိုယ်လက်နဲ့ပဲ ရိုက်ဖို့ ဦးလေးတစ်ယောက်က ပြောဖူးတယ်။
Feb 7, 2009, 4:02:00 AM
အဲလို အဖြစ်တွေ... မကြာမကြာ ကြားနေ... တွေ့ နေရတယ် အကိုရေ...စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာတော့ အတော်လေးပါပဲဗျာ...
Feb 7, 2009, 5:35:00 AM
Feb 7, 2009, 7:53:00 AM
ဟုတ်တယ် ကလူသစ်။ ကျနော် ဒီအကြောင်းကို `အကောင်းထူး မရှိ´ ဆိုပြီး ၀တ္ထုတိုပုံစံ ရေးဖူးပါတယ်။ အခု နေဇာ အတွဲတွေ ရေးတော့ ဒါလေးကို ပြန်ထည့်ချင်လို့ ပြန်ရေးတာ။ သူကလဲ ဒက်ခနဲကို သိတော့တာပဲကိုး။ :D
Feb 7, 2009, 8:06:00 AM
သိဆို တကယ့်အမာခံပရိသတ်တွေလေ ကိုကြီးစေးထူးရ ငှက်ငှက်ငှက်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်တိုင်းခံစားရတာကတော့ နင့်အောင်နာနေတာပဲလေ :(
Feb 7, 2009, 12:36:00 PM
ရင်နာလွန်းလို့ ဆက်မဖတ်ချင်ဘူး။ :(
Feb 7, 2009, 1:21:00 PM
တကယ်ဘဲ ဝင်ချင်တိုင်း ဝင်ခဲ့ပြီး၊ ခုမှ ပြန်ထွက်ချင်တာကော ဟုတ်ရဲ့လား၊ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကျော်ဝင်းမိခင်ကို တမ်းတ၊ ကျမပါးပြင် မျက်ရည်စိုလာတယ်၊( ကျမ အသည်းမနုပါ)။
Feb 7, 2009, 8:22:00 PM
ကိုစေးထူး ဘလော့ကိုကြိုက်လွန်းလို့ တန်းပလိတ်ပါ အတုခိုးလိုက်ပြီး တရားမစွဲနဲ့နော်း) ဒဏ်ငွေဆောင်ဖို့ ပိုက်ပိုက်မရှိဘူးး ။
၀ါးရင်းတုတ်နဲ့ ဇာတ်တူသားကတော့ ရဲဘော်သင်တန်းမှာမှလား အစ်ကိုရာ...။ ဟား..ဟား တွေးမိရင် ရယ်ချင်တယ်...။ မပြောတော့ပါဘူး အစ်ကိုရာ :)
Feb 8, 2009, 1:29:00 PM
နဂိုထဲက ပုပ်နေတဲ့ စစ်တပ်ကိုပဲ အပုပ်ချ ၊ အတင်းပြောနေတော့မှာလား ။ ဇော်မျိုးဘလော့လေးလဲ သွားကြည့်ကွာ ။ မင်းထက် သူက အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ရှိတယ် ။ မင်းထက် သတ္တိရှိတယ် လို့ မြင်တယ်ကွာ ။ မင်းက ဘလော့ပေါ်မှာတောင် လူတကာ သိနေတဲ့ စစ်တပ် ပုပ်တဲ့ အကြောင်းပဲ ဖွပြီး နှမ်းဖြူး ဆြာ လုပ်ချင်နေတဲ့ ကောင်ပဲကွ...။ ဇော်မျိုးဘလော့ဖတ်ပြီး မင်းအမြင်လေးတွေ ပို့စ်အဖြစ် ဖတ်ရဖို့ မျှော်နေမယ်ကွာ ။ နည်းနည်းလေး သတ္တိလေးဘာလေးမွေးကွာ ဖားထူး။
Feb 8, 2009, 1:32:00 PM
ကိုစေးထူးရေ…စာကြွေးတွေဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာစစ်ကနဲ… ဒီမှာလဲကော်လာဖိုးလိုခံစားချက်တူသူတယောက်ရှိပါတယ်လို့ 
Feb 8, 2009, 11:23:00 PM
You knowalot about soldiers. Are you an ex soldier?
Feb 9, 2009, 5:37:00 AM
ကိုယ်တိုင်ခံခဲ့ရပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပြန်မလုပ်ဖြစ်အောင် အမြဲစိတ်မှာဆုံးဖြတ်ထားတယ် ကိုစေးထူးရေ။ နောင် အနာဂါတ်မှာတော့ ဒီလိုအတိတ်ဆိုးတွေ ပပျောက်စေရမယ်ပေါ့း)
http://yeyintnge.blogspot.com/2009/01/blog-post_2377.html ဒါလေးဖတ်ပြီး ပြောကြည့်ကွာ... ။
Feb 9, 2009, 11:15:00 PM
စုပ်လဲရူး စားလဲဆူး ဆိုတာ ဒီလို ဘ၀မျိုးကို ပြောတယ်ထင်တယ်။ အရမ်းကို စိတ်မကောင်းဘူး။ တနေ့တခြားများများလာတဲ့ ကလေးစစ်သားလေးတွေရဲ့ဘ၀ :(
Feb 22, 2009, 10:38:00 AM